Rita, Writing for My Sake!: ကလေးငယ်များအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော အရေးကြီး အချက် (၅) ချက်
Posted by Rita at 4/26/2009 06:53:00 PM
မင်္ဂလာပါ၊ စာလာဖတ်ပြီး မှတ်သားသွားပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး အတော်များများက ကလေးတွေကိုဆိုရင် ငယ်တဲ့အချိန်မှာ ချစ်မယ် နည်းနည်းကြီးလာတာနဲ့ ဆိုးလို့ဆိုပြီး ရိုက်သင့်မှန်းမသင့်မှန်းမသိ ရိုက်ပြီး ကလေးကို အနာတရ ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ တချို့ ကလေးတွေဆို ကြီးတဲ့အထိ စိတ်မှာ ဒါဏ်ရာရသွားပြီး ဆိုးမိုက်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲလို မဖြစ်ရအောင် မိဘဖြစ်လာမယ့်သူတိုင်း ကလေးအကြောင်းကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ Child developement ကို အကျဉ်းချုပ်လေး လုပ်ထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေထားပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဂျူး ရေးတဲ့စာတွေကို သုတရော ရသာပါ နှစ်ခုလုံးပါလို့ သိပ်ကြိုက်တယ်။
"လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာ၊ ပုဗ္ဗာစရိယ မိနှင့်ဖ"
သားတို့ကို အချိန်ပြည့်နည်းပါး သွန်သင်နေမိတယ်။
တခါတခါတော့လည်း တွေဝေမိတယ်။ ငါလိုချင်တဲ့ ပုံစံကိုချည်း ထုတ်ဖော်မိနေရအောင် ငါကလည်း ဘယ်လောက်ပြည့်ဝလို့လည်း ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်လာတဲ့ အခါမှာပေါ့။ လက်ငင်းတင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ငိုတတ်တဲ့ အမွေ သားကြီးရနေပြီ။
ကလေး ပြီးတော့ နောက်တခါ လူပျိုပေါက်တွေအတွက် လိုအပ်ချက်လေးတွေပါ ရေးပါလား။ကျေးဇူး
မှတ်သားသွားပါတယ်ညီမရေ… သားတယောက်မွေးပြီးမှပဲ ကလေးတယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရတာ ဘယ်လောက်ပညာပါသလဲ သိတော့တယ်… ပြီးတော့ ငါအတော်ညံ့တာပဲလို့သက်ပြင်းချမိတယ်… ညီမရဲ့ ဒီပို့ စ်လေးကို ဖတ်ပြီး အမတို့ဆရာကြီးတယောက်ကို သွားသတိရမိတယ်… လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့အရိုးထုတ်သွားသူပေါ့… သူ့ အတွေးတွေ ဒီလိုများဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိသွားတယ်…
ကျွန်မလည်း generation ကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်တစား ရှိပေမယ့် မယူရင် ပိုကောင်းမယ့်သူမျိုးလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် define လုပ်မိတတ်တယ်။ နောက် ဘယ်လိုလာမယ် ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့။
အဲဒါကြောင့်လည်း ကလေးမယူတဲ့ စုံတွဲတွေကို ကျွန်မတော့ လွယ်လွယ် မဝေဖန်မိဘူး။ ကိုယ့်အလှည့်ကျလဲ မယူဘူး တွေးထားမိတော့လေ...
တာဝန်လည်း ယူနိုင် ကျေလည်း ကျေပွန်နိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာလေ မမီနိုင်တာ သိလေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စက တစ်ယောက်တည်း ဆုံးဖြတ်လို့ ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မမတန်ခူးတို့ မမသီတာတို့ ကိုပေါတို့ blog တွေ ဖတ်ပြီး မမတို့က ကျေပွန်တဲ့လူတွေလို့ ခံစားရပါတယ်။ မမ blog က သားသား ဆိုတဲ့ label ကို ကျွန်မ အကုန်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ သိပ်သဘောကျတယ်။
29 Dec 09, 16:32
29 Dec 09, 17:09
shwezinu: တော့တိုး-ချန် ကိုဒို့လည်းကြိုက်တယ်
29 Dec 09, 17:21
Rita: တော့တိုး-ချန် ကြိုက်တဲ့သူ တွေ့ရင် သိပ်ပျော်တာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
29 Dec 09, 23:22
tin min htet: တော့တိုကျန် ကြိုက်ရင် ငယ်ငယ်က တော်တော်ဆော့ပုံ ရတယ်။ တခါက ဖိုရမ်မှာ တော့တိုကျန် အကြောင်းပြောဖြစ်ကြတော့ ကြိုက်တဲ့သူ၊ အသေးစိတ် မှတ်မိနေသူ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။
29 Dec 09, 23:25
tin min htet: အရင်က မြသိန်း ဘာသာပြန်တာလည်း ရှိတယ်။ အခုတော့ ရဲမြလွင် ပဲ ရှိတော့တယ်။ ပြန်တောင် ရိုက်နေသေးတာ၊ အခန်း ၁၁ ထိပဲ ပြီးသေးတယ်။ ၆၃ ခန်းဆိုတော့ အများကြီးလိုသေးတယ်။ ရိုက်ပြီးရင်တော့ အီးဘွခ် ပို့လိုက်ပါ့မယ်။
30 Dec 09, 08:57
Rita: ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့တာလဲ မြသိန်းပဲ အစ်ကို။ ရဲမြလွင် နောက်ပိုင်းထွက်တော့ နဲနဲပဲ ဖတ်ကြည့်မိတယ်။ ပို့ပေးမယ် ဆိုလို့ သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ။
31 Dec 09, 13:34
နန်းညီ: တော့တိုကျန် စာအုပ်ရရင် နန်းညီလည်း လိုချင်ပါတယ်
1 Jan 10, 14:04
ဇွန်မိုးစက်: Happy New Year, Rita! စကားမစပ် တို့လည်းတော့တိုးကျန် သိပ်ကြိုက်တယ်။ ခုနစ်တန်းတုန်းက စဖတ်ဖူးတာ မြသိန်းဘာသာပြန်၊ တို့ရဲ့ကျူရှင်ဆရာမပေးဖတ်တာ။ နောက်၁၀တန်းပြီးတော့ ဆိုင်မှာတွေ့လို့ဝယ်ဖြစ်တာ ရဲမြလွင်ဘာသာပြန်
1 Jan 10, 14:06
ဇွန်မိုးစက်: တစ်မျိုးစီကောင်းတယ်။ တို့အထင်မမှားရင် မြသိန်းက အင်္ဂလိပ်ကနေ ပြန်တာ၊ ရဲမြလွင်ကတော့ ဂျပန်ကနေ တိုက်ရိုက်ပြန်တာ။
(တော့တိုး-ချန် ကို သိပ်မသိကြဘူးပဲ ထင်မိတာ။ ခုလို လူတွေ အများကြီးတွေ့ရတော့ သိပ် ဝမ်းသာတာပဲ။)
11 Jan 10, 10:40
ဇွန်မိုးစက်: ရီတာ..အိုတိုးထာကဲရော ဖတ်ဖူးလား။ ရဲမြလွင်ဘာသာပြန်ပဲထင်တယ်။ စာအုပ်နာမည်က ခြေမစုံလက်မစုံ ကျွန်တော့ဘဝ .... မှတ်ဉာဏ်တွေ တုံးကုန်လို့ အတိအကျမမှတ်မိတော့ဘူး။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးတဲ့စာအုပ်လို့ ပြောရင်ရတယ်။
ဇွန်မိုးစက်: တို့သဘောကျတာသွားက ဒုက္ခိတကို ဒုက္ခိတလို့ မဆက်ဆံပဲ သာမန်လူအတိုင်း ဖြစ်ခွင့်၊ လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် ကျောင်း အသိုင်းအဝိုင်းပဲ။ တော်တော်အားရကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။ ဖတ်လို့လည်း သိပ်ကောင်းတယ်။
11 Jan 10, 10:45
Rita: ဟုတ်လား အဲဒါတော့ မဖတ်ဖူးသေးဘူး။ ဂျပန်စာအုပ်တွေကတော့ တွေ့ရခဲတော့ ဖတ်ရခဲပါတယ်။ ဒါဖြင့် "အိုတိုးထာကဲ" လည်း တော့တိုး-ချန် ရဲ့ သူငယ်ချင်း တာကာဟာရှီလို မသန်စွမ်းပေမဲ့ ကံကောင်းတဲ့လူပေါ့။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်
11 Jan 10, 10:46
Rita: မြန်မာပြည်ပြန်ရင်တော့ ရှာဖတ်ဦးမယ်။ ညွှန်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။
11 Jan 10, 11:07
ဇွန်မိုးစက်: my pleasure :) မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်အုံးမယ်ပေါ့
11 Jan 10, 11:11
ဇွန်မိုးစက်: ရန်ကုန်အိမ်မှာတော့ အဲ့စာအုပ်ရှိတယ်။ တို့မဖတ်ဖူးတဲ့ နောက်တစ်အုပ်က 'ရက်လေးဆယ်စစ်ပွဲ'။ သူလည်း တော့တိုးကျန်လိုပုံစံမျိုးပဲ။ ကလေးမလေးက မိဘနဲ့ ရက်၎ဝကြာအောင် စိတ်ကောက်တဲ့အကြောင်း
11 Jan 10, 11:17
ဇွန်မိုးစက်: ဂျပန်ဘာသာပြန်ပဲ။ ရီတာ ကြုံရင်ဖတ်ကြည့်ဖို့။
11 Jan 10, 11:34
Rita: okie ကိုယ် ရှာကြည့်ပါမယ်။